Global Voices teny Malagasy » Feon’ny Fanantenana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Jona 2019 16:28 GMT 1	 · Mpanoratra Eddie Avila Nandika miora
Estancia, Filipina – nanjohy ny Rising Voices tamin'ny 2014
Ny Novambra 2013, namely tamin'ny fomba nahatsiravina vondrom-piarahamonina maro nanerana an'i Azia Atsimo-Atsinanana ny Rivomahery Haiyan, niaraka tamin'ny hery izay mbola tsaroan'ny ain'ireo mponina maro mandritra ny andom-piainany. Ireo tanàna tao Filipina, toa an'i Estancia, izay tena voadona mafy tokoa, ary efa volana maro taorian'ilay loza voajanahary, mbola andrasan'ny mponina hatrany ny hahatanteraka ireo fampanantenana marobe tsy efan'ny manampahefana. Entanin'ity tetikasa ity ireo mponina ao an-toerana mba hampitao ny tenan'izyho toy ireo olontsotra mpampita vaovao hitaterana ny tsy fisian'ny fivoarana amin'ny resaka fanarenana, sy koa hizara ireo fomba fijery voalohany momba ny fizakàn'ny vondrom-piarahamonina.
Ifantohan'ny tetikasa ny fandraisana anjaran'ny tanora avy any amin'ny faritra, ny fanofanana azy ireny hanana traikefa amin'ny asa fanaovana gazetin'olontsotra, fakàna saripika, ary na ny fandraisana anjara amin'ny onjampeo “Pulso sang Banwa ” anaty aterineto aza.
Hita anatin'ìireo tantara avokoa ny vaovao momba ny fanetsehana mitranga amin'izao fotoana izao mba hanoherana ny fihisatry ny ezaka fanarenana, ka hatramin'ny vaovao momba ireo rivomahery hafa ho atrehan'ny faritra.
Bilaogy: Voices of Hope 
Facebook: Voices of Hope-Estancia 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/05/139748/
 Rivomahery Haiyan, : http://en.wikipedia.org/wiki/Typhoon_Haiyan
 Pulso sang Banwa: http://voicesofhope.tk/category/radio-program/pulso-sang-banwa-audio/
 Voices of Hope: http://voicesofhope.tk/
 Voices of Hope-Estancia: https://www.facebook.com/pages/Voices-Of-HOPE-Estancia/807600152625480